Izitokhwe ezi-6 eziyingozi kakhulu kwimarike yaseSpain | Ezezimali
Izitokhwe ezi-6 ezinobungozi kakhulu kwimarike yaseSpain
Ukujonga phambili kulo nyaka siwuqalileyo, uluvo oluvunyelweneyo lokuba abahlalutyi abahlukeneyo bezemali bayasungula kukuba abatyali mali kufuneka bakhethe ngakumbi ekubumbeni iipotifoliyo zabo zokhuseleko kwaye baphephe izindululo zemarike yemasheya kwezona zinto zinobungozi eziyimali. Kuba xa ujongene nemeko engentle, ungaphulukana nokuninzi ukusukela ngoku. Ngale ndlela, kukho uthotho lwamaxabiso okwangoku anetyhefu xa efumana into ephantsi ecace gca. Kwaye yintoni kwi imeko ye-bearish Iimarike zezemali zinokuphuhlisa iintshukumo ezinzima kakhulu njengee-arcades kulo nyaka.
Olunye ukhuseleko lubandakanyiwe kwisalathiso esikhethiweyo sezabelo zaseSpain, i-Ibex 35, baye bafumana ukwehla okukhulu. kufutshane ne-50% kwi-2018 nokugqitha kuyo kwiimeko ezithile. Le meko inokuphindwa kulo nyaka kwaye ngamandla amakhulu ukuba ukuvela kweemarike kubi nangakumbi kunonyaka ophelileyo. Ukuthintela iingxaki kuya kufuneka uqaphele ukuba ngawaphi amaxabiso apho ungafanele kubekwa kwiinyanga ezizayo.
Nangona ukuvela kwe-Ibex 35 kuyinto ethile, oko akuthethi ukuba isetyenziswa kuwo onke amaxabiso kwimarike yemasheya. Hayi kangako. Kuhlala kukho amacandelo athi zithande ukujongana naphantsi (okanye iphakama) kunabanye. Esi sesinye sezicwangciso ekufuneka uzisebenzisile ukusukela ngoku ukuphucula iphothifoliyo yakho elandelayo. Ukukunceda wenze esona sigqibo sihle, siza kukubonisa ukuba zeziphi izindululo zezabelo ezisemngciphekweni wokuhla kwiinyanga ezizayo.
1 Amaxabiso ayingozi: Usuku
2 Inditex ngesinqe esinamandla
3 I-Sniace emaphethelweni enzonzobileni
4 Izandiso ezininzi
5 Solaria, ingozi yakho yi-vertigo
6 I-repsol ixhomekeke kwixabiso leoyile
Amaxabiso ayingozi: Usuku
Ukuba okwangoku kukho ixabiso elibonisa ngokucacileyo lo mkhwa, alithandabuzeki elokuba le khonkco lokuhambisa ukutya. Iziganeko zayo zangaphambili azilunganga kwaphela ukusukela kunyaka ophelileyo malunga ne-60% ishiyekile kumaxabiso abo. Inengxaki enkulu yokuhlawula ityala layo kwiibhanki. Ngale ndlela, awungekhe ulibale ukuba i-Día lukhuseleko olufumene ukubetha okutsha kwi-arhente kaMoody, eye yehlisa ukulinganiswa kwetyala layo kwaye yalibeka kwindawo engeyiyo ngenxa yoqikelelo olungezantsi lwemivuzo kunye nemali iingxaki ezinokuvela xa ungafumani ndlela zintsha zemali.
I-EBITDA (inzuzo yokusebenza) yale nkampani idweliswe kwi-Ibex 35 yehle ngama-24% kwiinyanga ezilithoba zokuqala zonyaka ophelileyo, ukuya kwi-281 yezigidi zeerandi, kwaye ityala layo lifikelela kwizigidi ezili-1.422. Ukuthengisa kwelo xesha kwehle nge-9%, ngokuchanekileyo ngenxa yokwehla kwemali yaseArgentina neyeBrazil, ukuya kuthi ga kwi-6.949 yezigidi zeerandi; ngaphandle kokubala umphumo wemali, ngekhule i-2,7% ngeli xesha. Ngumzekelo ombi wokuthenga izabelo ngoku. Kuba, enyanisweni, umngcipheko mkhulu kakhulu kunezibonelelo ezinokuziswa lolu hlobo lomsebenzi.
Inditex ngesinqe esinamandla
Nangona inokothusa inxenye elungileyo yabatyali mali abancinci nabaphakathi, inkampani eyolukiweyo yenye yezona zinobungozi kolu vavanyo lweemarike zamasheya. Oku kuboniswa linani elilungileyo labahlalutyi bezezimali abathi elona cebo lililo labatyali mali kukuthengisa izabelo zabo. Akumangalisi ukuba babonakalise ukuba banako bahlupheke kakhulu kwiinyanga ezimbalwa ezizayo. Ngaphaya kokunye ukuqwalaselwa kobuchwephesha kwaye mhlawumbi nakwindawo yokujonga esisiseko.
Kwelinye icala, kubaluleke kakhulu ukwazi ukuba ilaphu laseGalician libona amaxabiso alo kwimarike yemasheya enqunyulwa ziiarhente ezahlukeneyo zezemali. Enye yezona zinto zibalulekileyo zivela kuMorgan Stanley, eliye lanciphisa ixabiso ekujoliswe kulo kwinkampani nge-19%, isuka kwi 26 euro ngenxa ye 21 euro. Umkhwa onokuqina kulo nyaka mtsha ukuya kwinqanaba lokuba lelinye lawona maxabiso anobungozi ngalo mzuzu kuba kubonisiwe ukuba amandla alo okuhlaziya aphelile kwiminyaka edlulileyo.
I-Sniace emaphethelweni enzonzobileni
Phakathi kweenkampani ezenza imali ezinkulu, enye yezona zinto zibalulekileyo kwezobuchwephesha ngaphandle kwamathandabuzo yikhemistri eseCantabria. Ungalibali ukuba ithengisa kuphela kwi-0,10 euro, kodwa ngohambo olusezantsi oluyingozi nangakumbi kwaye luyakhathazeka kunangaphambili. Ngokwazi ukuba nokuba nzulu iingxaki kwezemali. Ngale ndlela, uSniace uvela kunqunyanyiso lwentlawulo olwenzeka kwiminyaka emihlanu eyadlulayo kwaye ibingomnye wabaphembeleli bokulahleka yinxalenye elungileyo yexabiso ebenalo, umzekelo, iminyaka eli-15 okanye engama-20 eyadlulayo.
Ngayiphi na imeko, enye yeemeko ezinokuthi ziqwalaselwe ngabatyali zimali abancinci nabaphakathi kukuba izabelo zale nkampani ziwela kwi ukunqunyanyiswa koluhlu. Kwimeko apho, baya kuphulukana nayo yonke iminikelo eyenziwe ngexabiso. Akunakulindeleka ukuba esi siganeko sikhule kwiminyaka embalwa ezayo. Ingakumbi ukubona imali enzulu esele inayo kwaye ekhokelele kuqikelelo lwayo kwimarike yemasheya engagqithi kumanqanaba e-0,10 euro ngesabelo ngasinye. Elinye lamaxabiso asezantsi eenkampani ezidweliswe kwiimarike zezabelo kwilizwe lethu.
Enye yezona zinto zixhaphakileyo kweli xabiso likhethekileyo kwimarike yemasheya kukuba kuye kwavela iinkqubo ezahlukeneyo zokunyusa imali kule minyaka idlulileyo. Ukujongana nesidingo esixhaphakileyo se- funa inkxaso-mali Kwiimarike zezemali ngokwazo, njengoko kwenzekile kule minyaka idlulileyo yorhwebo. Ngale ndlela, kufanele ukuba kukhunjulwe ukuba enye yeenkampani ezincinci ezidweliswe kwimarike yaseSpain, njengakwimeko ethile ye-Ercros, ihamba kwezi meko zinye kwaye ke enye yazo kufuneka ilumke ngakumbi ukuthatha izikhundla kulo nyaka unzima kangaka wotyalo-mali.
Ayilolize, ukuba into iyazahlula I-Ercros kwiinyanga nje ezidlulileyo kungenxa yokungazinzi okugqithisileyo, nangona kungaphantsi kakhulu. Ngokusebenza ngokuqinileyo okubeka emngciphekweni ukusebenza kwabatyali mali abancinci nabaphakathi. Kuyinyani ukuba ungafumana imali eninzi ngokuvula izikhundla kweli xabiso, kodwa ngenxa yesizathu esinye nemali onokuziyekela kuyo yonke imisebenzi oyenzayo ngonyaka ibaluleke kakhulu.
Solaria, ingozi yakho yi-vertigo
Le nkampani inyuke kakhulu kunyaka ophelileyo kangangokuba Ukugula kwindawo ephezulu inokuba yinyani kulo msebenzi. Akumangalisi ukuba, inxenye elungileyo yabahlalutyi bezezimali bexela ukunciphisa okunamandla kwixabiso kwaye oko kungakhokelela kumanqanaba angaziwayo kwiinyanga ezintandathu ezidlulileyo. Emva kokuphononongwa kwakhona okunamandla, akukho mathandabuzo ukuba ukungena kwixabiso kuyinto eyoyikisayo. Ukuya kwinqanaba lokuba kufuneka ulahlekelwe ngaphezulu kokufumana. Alisekho ixesha lokuvula izikhundla kulo mmeli wezabelo zamazwe ethu.
Unonophelo olulodwa kufuneka lwenziwe nommeli we Enye indlela yokuThengisa (MAB) I-Eurona. Emva kwayo yonke loo nto, konke okulindelweyo ekukhuleni kwabo akuzange kufezekiswe, kwaye kwezinye iimeko kungabikho nokuqikelela okuqinisekileyo. Kuyinyani ukuba iwele kakhulu kwimarike yemasheya, kodwa kunjalo inokwenza okungakumbi ukusukela ngoku. Olu didi lweenkampani ezinemali encinci kangaka ziqhutywa zizinto ezilindelweyo kwaye ukuba ezi azifezekiswa, ziwa ngamandla amakhulu, ngaphezulu kwesiqhelo kula matyala.
I-repsol ixhomekeke kwixabiso leoyile
Okokugqibela, inkampani yeoyile yaseSpain kuya kufuneka ibekelwe bucala ngaphandle kokuba yenze kakuhle kakhulu kule minyaka mithathu idlulileyo. Oku kungenxa yokuxelwa kwangaphambili kwexabiso lokuhla komgqomo wegolide emnyama kwaye ngokungathandabuzekiyo kuya kuba nefuthe elibi kakhulu kwenye yeenkampani ekubhekiswa kuzo zesalathiso esikhethiweyo sezabelo zamazwe afana Repsol. Ukusukela ukuba imibutho yamazwe aphesheya ibala ukuba inqanaba lale mandla lingawa kulo nyaka liye kumanqanaba angaphantsi kweedola ezingama-50 umphanda.
Ukuxhomekeka kwezinto ezenziwa yinkampani ye-oyile yesizwe ngale asethi yezemali kuphezulu kakhulu kwaye oku kwenza ukuhla kunyuka kwiimarike zezemali kakhulu ngakumbi kunabanye abameli be-Ibex 35. Apho ngenye imini inyuka nge-5% kwaye enye ilahlekelwe yipesenti enye okanye ngaphezulu. Ewe ayililo ixabiso elithe cwaka kubatyali mali abazikhuselayo kwaye kuyakufuna umonde omninzi ukuchaza isicwangciso esilixesha sokwenza ukonga kunenzuzo kwimithambo enzima njengale yangoku.
Njengoko sele ubonile, mininzi imigibe elungiselelwe le ngxowa kulonyaka kwaye kuya kufuneka uphume kuyo kwiinyanga ezizayo. Njengesicwangciso sokukhusela iiasethi ozigcinileyo. Kude kuchazwe ukwenza ukonga kunenzuzo kumthambo onzima njengoko kuya kubakho ngoku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Iimveliso zezemali » Izitokhwe ezi-6 ezinobungozi kakhulu kwimarike yaseSpain
Ukhuseleko olutsha kwimarike yaseSpain
Ibex 35 ngaphambi komceli mngeni wamanqaku angama-9800